» मकवानपुरे कलाकार अजय पुडासैनी अब गायक पनि, केही दिनमै गीत रिलिज हुने
मकवानपुरे कलाकार अजय पुडासैनी अब गायक पनि, केही दिनमै गीत रिलिज हुने
७ असार २०७६, शनिबार ०७:४४
मकवानपुर, ७ असार । नेपाली कथानक चलचित्र ‘कारखाना’ का साथै करिब १ दर्जन म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेका मकवानपुरे कलाकार अजय पुडासैनी गायकका रुपमा समेत आफुलाई स्थापित गर्ने तयारीमा छन् । विभिन्न सर्ट मुभिमा समेत अभिनय गरिसकेका अजयले आफुलाई पहिलेदेखि नै मनपर्ने साँगितिक क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन थालेका हुन् ।
कलाकारिता क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन संघर्षरत उनले केही दिनमा नै आफ्नो आवाजमा रहेको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । ‘तिम्रो मेरो प्रेमको कथा’ बोलको उक्त गीतमा उनी आफैले आवाज दिनुका साथै अभिनय समेत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भिडियोको ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै उनले भिडियोको सम्पादन कार्य करिब समाप्त भएको र केही दिनमा नै म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिने बताए ।
रामशरण पृथकको शब्द तथा बिनय केटुको संगित र एरेञ्जमा गीत तयार पारिएको हो । आराही ईन्टरटेन्मेन्ट स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको गीतको म्यजिक भिडियोमा अजयसँगै रिजलको अभिनय रहेको छ । गीतमा बाल कलाकारका रुपमा दिपेन र कल्पनाले अभिनय गरेका छन् । मकवानपुरका चर्चित कलाकार विक्रम लुङ्वाको निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियोलाई विक्रमले नै छायाँकन तथा सम्पादन गरेका हुन् । उनलाई सागर राईले छायाँकनमा सहयोग गरेका छन् । म्युजिक भिडियोलाई हेटौँडाकै विभिन्न स्थानमा सुटिङ गरिएको छ । ओपेरा ईन्फोटेन्मेन्ट सिने प्रालिको पोष्ट प्रोडक्सन रहेको म्युजिक भिडियोलाई केही दिनमा नै रिलिज गरिनेछ ।
लोक, आधुनिक, पप तथा र्याप सबै प्रकारका गीत समेत लेखेका अजयको सानैदेखिको मुख्य शोख गायन र लेखन नै हो । धेरै संख्यामा गीत लेखेर राखेका अजयले बिस्तारै ति रचनाहरुलाई बजारमा ल्याउने बताएका छन् । करिब ७ वर्षअघिदेखि कला क्षेत्रमा लागेका उनले हेटौँडाकै गायक सुनिल पाण्डेयको गीतमा समेत मोडलिङ गरेका छन् । अजय मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मनकामना चोकका स्थायी निवासी हुन् । उनी हेटौँडामा समेत विभिन्न स्टेज प्रस्तुतिका लागि चर्चित छन् ।
भिडियो ईडिटिङ सिक्दै हुनुहुन्छ ? उसो भए यो भिडियो तपाईको लागि काम आउन सक्छ
तामाङ चलचित्र ङ्हो (भाग्य) को गएको हप्ता बैशाख ७ गते शनिबार विशेष प्रदर्शन गरिएको थियो । काठमाण्डौंको राष्ट्रिय सभागृहमा प्रदर्शन गरिएको चलचित्रमा तामाङ समुदायको कथा छ । भुवन स्याङ्बो तामाङको निर्देशन तथा कोरियोग्राफीमा तयार भएको चलचित्रलाई सुर्य लामाले खिचेका हुन् । सुनिमाया तामाङको निर्माणमा बनेको चलचित्रको पोष्ट प्रोडक्सनको जिम्मा जिग्मे मिडियाले लिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
चलचित्रमा आरम्भ तामाङ, किसमान तामाङ, निर्मला तामाङ, एलेक्स घले, छिमी माम्बा, मारनेन वाइबा, अनिता तामाङ, डोल्मा तामाङ, राजन तामाङ, निलमान तामाङ, रोज तामाङ, रिमान तामाङ, विजय तामाङ, झरना गुरुङ, सुमी तामाङ र बाल कलाकार तेञ्जिङ सोनामले अभिनय रहेको छ । नरमान (रविन) तामाङको पटकथा, राहुल राई र सुर्य लामाको छायांकन हेर्न सकिने चलचित्रमा राजु तामाङले द्वन्द्व निर्देशन गरेका छन् । चलचित्रका गीतहरुमा टिका बम्जन, सागर एस वाइबा, आरम्भ तामाङ र जितु लोप्चनको आवाज रहेको छ । चलचित्र ‘ङ्हो’ फापरे फिल्मस् प्रालिको तेस्रो प्रस्तुति हो । चलचित्र उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली क्षेत्र र आसपासमा बोलिने भाषालाई प्रयोग गरिएको बताइएको छ । धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका, लताव, धुसेनी, तावल, काठमाडौंका केही भाग र सिन्धुपाल्चोकको गुफाडाँडा लगायतको स्थानमा चलचित्रको छायांकन गरिएको हो ।
खाजा खाने समयमा सम्झनालाई सम्झँदा थप्पड (भिडियो)
यस भिडियोमा हेटौँडाका युवाहरुले तयार पारेको कमेडी क्लिप्सलाई प्रस्तुत गरिएको छ । राजु घलानको परिकल्पनामा तयार भएको भिडियोलाई सुवाश लामाले सम्पादन गरेका हुन् । सानुकान्छा घलान र राजु घलानको अभिनय रहेको यो भिडियो हेरेर तपाई पनि हाँस्नुहोस् ।
नेपालकै सबैभन्दा अग्लो राष्ट्रिय झण्डा
मकवानपुरको हेटौँडामा गएको फागुनमा सम्पन्न ‘राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापारमा मेला’ मा सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा अग्लो राष्ट्रिय झण्डा बनाएर फहराइएको थियो । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको क्याम्पाडाँडा चौरमा भएको मेलामा ५१ फिट अग्लो राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको हो । त्यो झण्डा कस्तो थियो त ? हेरौँ भिडियो–
मेलाका अवसरमा आयोजित ‘जिपिएक्स हेटौँडा आईडल’ मा रुपक कालिराज विजयी भएका थिए भने मकवानपुरका दुई सञ्चारकर्मी भुवन घलान र पारु महराले समेत चर्चा बटुलेका थिए । दुई सञ्चाकर्मीमध्ये भुवन घलान फाईनल सम्म नै पुग्न सफल भएका थिए । प्रतियोगितामा गायक संगीतकार शिखर सन्तोष, किशोर डंगोल र विजय कार्की निर्णायक थिए । मेलामा उत्कृष्ट प्रतिष्पर्धीले स्टेज पर्फोमेन्ससँगै हरेक दिन चर्चित कलाकारहरुले प्रस्तुति दिएका थिए । मेला स्थलसम्म पुग्नका लागि निःशुल्क बस सेवा र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । मेलामा जम्मा ४ सय ४० वटा स्टलहरु रहेका थिए भने हेलिकोप्टरबाट हेटौंडा बजारलगायत प्राचीन स्थलको अवलोकन गर्न मिल्ने समेत व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त मेलामा स्टन्ट देखाएकै कारण पाईलटको लाईसेन्स समेत धरापमा परेको थियो ।